အခမဲ့ psn codes တွေကို | အခမဲ့ psn ကုဒ်မီးစက် | အလုပ်လုပ်သောအခမဲ့ psn ကဒ် codes တွေကို
အခမဲ့ရေနွေးငွေ့ codes တွေကို
အခမဲ့ psn codes တွေကို
အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ
အခမဲ့ Google Play လက်ဆောင်ကဒ်
အခမဲ့ Amazon လက်ဆောင်ကဒ်ကုဒ်မီးစက်
အခမဲ့ iTunes ကိုလက်ဆောင်ကတ်များ
ပင်မစာမျက်နှာ // ဘ‌‌လော့ခ် // အခမဲ့ psn codes တွေကို
အဒ်မင်ခြင်းဖြင့်> အတွက် Uncategorized - 20 သြဂုတ်လ 2019
100% အလုပ်မလုပ်အခမဲ့ PSN ကုတ် General
သငျသညျအခမဲ့အမှုအရာရနိုင်လျှင်အေးမြဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော အစဉ်အဆက်ခလုတ်ကို့ကလစ်နှိပ်နှင့်အတူတစ်ခုခုရရှိ၏အတွေးရှိခဲ့? အဲဒီမှာအထဲကလူအများ၏အများစုမှာအခုအချိန်မှာအွန်လိုင်းအခမဲ့ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်အခမဲ့ PSN codes တွေကိုအဘို့အကြောင်း Google တွင်ရှာဖွေနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ အခမဲ့ PSN ကုဒ်မီးစက်, စစ်မှန်သောရလဒ်များကိုအာမခံကြသည်!
အဆိုပါ PSN ဝန်ဆောင်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Sony ကထောက်ပံ့သည်။ ကသာကို Sony PlayStation ဂိမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အခါနောက်ကျောနိုဝင်ဘာလ 2006 အတွက်, ဘယ်သူမှကြောင့်ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များမှုရရှိလိမ့်မယ်လို့သိထားတယ်။ နောက်ပိုင်းပေါ်က Blu-ray player, စမတ်ဖုန်းနှင့်ပင် HD ကိုရုပ်မြင်သံကြားကနေတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သန်း 130 ကျော်ကလူယခုအခါ၏အဖြစ် PSN ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေနှင့်အရေအတွက်သာတိုးပွားလာစောင့်ရှောက်မည်။ တဦးတည်းရဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် PSN ၏အသုံးပြုမှုများအတွက် key ကိုအကြောင်းပြချက်အခြေခံအားဖြင့်အွန်လိုင်းမှဈေး PlayStation စတိုးဆိုင်ပစ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ PSN codes တွေကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
သင်ရုံအမှားဖွငျ့ဤ Gig လမျးမှာသှားသောစာဖတ်သူများမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီမှာခေါင်းစဉ်အပေါ်အချို့သောသစ္စာဉာဏ်အလင်းသည်။ အဆိုပါ PSN codes တွေကိုသာ PlayStation ပလက်ဖောင်းအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ (duh, Pretty သိသာ!) ။ ဒါဟာဆုလာဘ်တစ်ခုအချို့ကြင်နာမှီဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ဂဏန်းနှင့်နံပါတ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်တဲ့ကုဒ်ပါပဲ။ သင်တစ်ဦးတစ်လကနေ 12 လအတွင်းအထိအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုသင်အမှန်တကယ်သော့ဖွင့်အမျိုးမျိုးသောအခမဲ့ဂိမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် PlayStation ၏အွန်လိုင်းကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေ့မှာအသုံးပြုသောဖူးလျှင် PSN ကုဒ်သာအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ သာ 1 လူတစ်ဦးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကုဒ်နဲ့တွဲသုံးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ PlayStation အကောင့်သို့ log ပြီးနောက်သင် PlayStation စတိုးဆိုင်အပိုင်းကိုသွားထိုပြည်၌လည်းသင်၏ကုဒ်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ PSN ကဒ်၏တန်ဖိုးကိုပေါ် မူတည်. PlayStation ဂိမ်း access ကိုလအတွင်းသော့ဖွင့်။
အချို့သောအခမဲ့ codes တွေကိုရရန်အချိန်!
ထွက်ပေးရက်ဘ်ဆိုက်များအများကြီးထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်အရေးဆိုမှု အလုပ်လုပ်သောအခမဲ့ PSN codes တွေကို သို့မဟုတ်ရှိတယ် အခမဲ့ PSN ကုဒ်မီးစက် အရာသဘာဝကျကျ PlayStation ပွူဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသို့သော်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများကပ်နှင့်သင့်အဖိုးတန်အချိန်ဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်သို့မဟုတ်သင့် system ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအချို့အန္တရာယ်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုမတပ်ဆင်ပါနဲ့။ ရလဒ်အဖြစ်သင်တို့သည်နောက် PSN ကုဒ်အတူတက်အဆုံးသတ်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမထိခိုက်စေတက်အဆုံးသတ်။ ဒါ့အပြင်သင်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်အခြားနှောင့်အယှက်လှုပ်ရှားမှုရုံ codes တွေကိုရရန်အဆုံးမဲ့စစ်တမ်းများပါလိမ့်မယ်။ စစ်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာအချိန်အများစုမှာဖြစ်စေသူတို့သည်သင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ဆိုး, NO ကုဒ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုအဆုံးသတ်!
ဒါပေမဲ့! သင့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လုံးဝလုံခြုံအတွေ့အကြုံနှင့်သင် PlayStation store မှာအဘို့ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်သည်ကိုလုံးဝလုပ်ကိုင်နိုင်သော PSN codes တွေကိုအာမခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်အချိန်အခြားဆိုက်များကိုနှိုင်းယှဉ်လမ်းလည်းနည်းသည်။ မည်သည့်စျေးနှုန်းပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းတဲ့ကုဒ်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ညာဘက်?
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဘာမျှမပု generate နိုင်ရန်အတွက်လုံးဝရှိပါတယ် အခမဲ့ PSN codes တွေကို အလုပ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများမှာ codes တွေကို generate ။ အခမဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ Generating အတွေ့အကြုံကို Hassle ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့အံ့သြဖွယ်အထွက်၏ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ကြသည်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမြဲအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ နယူးနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ codes တွေကိုအားလုံးတစ်လျှောက်လုံးရွေးနှုတ်တော်မူရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အနှေးန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်မှမျှော်မှန်းထားသည်ဘယ်တော့မှရပါမည်။ ကျနော်တို့ကနှေးကွေးယူခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကမြန်ဆန်စွာလမ်းလုပ်ပေး!
ကနေရှေးခယျြဖို့ options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ်များ၏ဂိုဏ်းဂဏ 10 $, 20 $ နှင့် 50 $ အမျိုးမျိုးအတွက်လာ။ သငျသညျအလိုရှိကြသည်နှင့်အကအားလုံးကိုဥစ္စာကြောင်းကဒ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတည်ငြိမ်အခါအဖြစ်သူတို့ပဲကျပန်းနံပါတ်များကိုအစုတခု generate ရှိရာကတခြားအတုက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မတူဘဲ, ငါတို့ PlayStation ကတ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်ငါတို့ချစ်သောအသုံးပြုသူများကဖြန့်ဝေ။
သင်ကကြောက်မက်ဘွယ်သောတဲ့ pop-ups စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေသာကြော်ငြာများမှလုံးဝပင်သော်လည်းကြော်ငြာပေါ့ပ်တက်မက်ဆေ့ခ်ျများမရှိကြပါဘူး။ SO မျှကိစ္စရပ်များကိုလည်းနှင့် ပတ်သက်. !
ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုကောင်းတစ်ခုအသုံးပြုသူဒေတာဘေ့စနှင့်အတူအားလုံးနီးပါးဟာဂိမ်းနိုင်ငံများသို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီး၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ဂိမ်းကစားကြောင်းစိုးရိမ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပေါင်းတို့၏စောင့်ရှောက်မှုယူထားပါတယ်။ J ကို
SO သင်ဘာစောင့်ဆိုင်းနေကြ ?!
ရိုးရှင်းစွာအကျွန်ုပ်တို့၏ကူးခေါင်း အခမဲ့ PSN ကုဒ်မီးစက် နှင့် generate ကို click! ဒီထက်ပိုမိုလွယ်ကူရနိုင်သလား? အချိန်စောင့်ဆိုင်းလွန်း 30 စက္ကန့်ထက်လျော့နည်းသည်။ သငျသညျဂိမ်းကစားကျွန်တော်တို့ကိုသံသယရှိလျှင်ဒါဟာလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ ကြောင့် hoax ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်လုံးဝနားလည်။ ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုမမွငျ?
အခမဲ့ PSN ကုဒ်တွေကို လူတိုင်းအတွက်! မြန်ဆန်လုံခြုံတဲ့, ကို Safe နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော! လိမ်လည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကမုန်း, လှိမ့တွေ့မြင်!
49 မှတ်ချက် ON " အခမဲ့ psn codes တွေကို "
noname7မှာ: 50 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Vengence7မှာ: 52 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ဤမျှလောက် up ပြုလုပ်စောင့်ရှောက်ကောင်းသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Tommy ဘီလ်3မှာ: 38 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ဒါရိုက်တာ Woody6မှာ: 34 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
တဦးတည်း Core9မှာ: 27 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
50 အမေရိကန်ဒေါ်လာလက်ဆောင်ကဒ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တွေ့ပေးနိုင်ပါတယ် ...
Homulus2မှာ: 15 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
BMWFan7မှာ: 30 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ခရစ်စမတ်သစ်ပင်7မှာ: 15 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Emil 10 မှာ: 36 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
လုလင်ပျိုဤဖြစ်စဉ်ကိုဒါ looooong ကြာ
Emil 10 မှာ: 39 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Ramen ခေါက်ဆွဲတ7မှာ: 34 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
အန်သိုနီ 10 မှာ: 05 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Fred6မှာ: 24 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
မွောငျး7မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ရှငျဘုရငျ Artur6မှာ: 39 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Hamza2မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ps4 အသုံးပြုသူအမည်ငါ့အဘို့ထိုသို့ပြုကျေးဇူးပြုပြီးတစ်စုံတစ်ဦးက elitebro786 ။
လိပ် 10 မှာ: 49 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
3 psn codes တွေကိုအလုပ်လုပ်ရတယ်, ယနေ့ဆိုပိုပြီးရမရှိမဖြစ်
zonne 8 မှာ: 23 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်လောဘကြီး dude ဖြစ်မနေပါနဲ့
အမျိုးသမီးများနေ့မီးဖိုချောင်ကိုသွား 1 မှာ: 28 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
သင်လိုချင်သောအရာခပ်သိမ်း, သင်ကတယ်, သင်ကရတယ်လိုအပ်သမျှကိုသင်ကတယ်အားလုံးမှာဘာမှ
, Legit လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာ 10 မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
, Legit လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာ
လှည်7မှာ: 07 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ငါ့အစ်ကို FOR ONE ကုတ်ရပြီ
Demilo 10 မှာ: 57 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Foxy_foire9မှာ: 22 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
လုလင်ပျို, OMFG: () () () () () () ()
က Terminator6မှာ: 31 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Tron4မှာ: 57 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
generated3codes တွေကိုယနေ့😀 looooooooooooool
psnmaster5မှာ: 36 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ငါ၏အ psn codes တွေကိုရရှိထားသည့်
ငှက်7မှာ: 11 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Dude_pls 1 မှာ: 33 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
သငျသညျအကြှနျုပျကို dude ကူညီပေးနိုငျသနညျး ငါ၏အ skype က terminator2001 ဖြစ်ပါသည်
Tron 1 မှာ: 54 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကား (y) သည်
asam 8 မှာ: 17 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Tjokyo 10 မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Bontager 11 မှာ: 32 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ဇော်ဂီရောင်5မှာ: 22 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Dariyus7မှာ: 29 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
p: အောင်မြင်စွာ 50 $ လက်ဆောင်ကဒ်ရွေးနှုတ်တော်မူ
Miyagiy7မှာ: 47 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
karakam7မှာ: 59 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ရော်ဘီ 8 မှာ: 16 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
13379မှာ: 44 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Babel 11 မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Babel 8 မှာ: 43 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
grador 10 မှာ: 58 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Derik 8 မှာ: 51 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Budhasa 8 မှာ: 51 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
darh 12 မှာ: 09 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Galan3မှာ: 18 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ website ကိုတွေ့ပြီကြောင်းဝမ်းသာပါတယ်
krush4မှာ: 28 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ps46မှာ: 28 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
kana4မှာ: 52 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ပုစွန်2မှာ: 57 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
အမည် (လိုအပ်) အီးမေးလ်လိပ်စာ (လိုအပ်) Website